भारतीयहरुले कसरी लिन्छन् नेपाली नागरिकता ? - USNEPALNEWS.COM
भारतीयहरुले कसरी लिन्छन् नेपाली नागरिकता ?
अहिले पनि भारतका धेरै नागरिकहरुले नेपालको समेत नागरिकता लिएका छन् । भारतको बिहार राज्य स्थित लुरफुल्लापुर दरभंगाका अशोक गुप्ताले अशोक साहको नाममा नेपाली नागरिकता लिए । भारतको बिहार स्थित लत्तिफुल्लाहपुर ३ बेनिपुर दरभंगाबाट आधार कार्ड लिएका छन् । उनका पिताको नाम रवि साह छ । यिनै अशोक गुप्तालाई जिल्ला प्रसासन कार्यालय महोत्तरीले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिएपछि नेपाली नागरिक अशोक साह बनेका छन् ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालय महोत्तरीबाट २०६५ सालमा बगडा ३ ठेगाना राखेर बाबु रवि साहकै नामबाट नागरिकता लिएका छन् । उनको नागरिकता नम्बर १८३०४०÷८२ छ । यति मात्रै होइन उनकी श्रीमतीले समेत नेपाली नागरिकता लिएकी छिन् । श्रीमान अशोक साहको नामबाट उनले पनि २०६५ सालमा नागरिकता लिएकी छिन् ।
उनीहरुको नक्कली नागरिता छ भनेर पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा निवेदन परिसक्यो । निवेदन मात्र होइन छानविनका लागि पत्र पनि काटिए तर पनि उनको यस्तो सेटिङ छ कि उनको नागरिता खारेज नै हुदैन ।
अशोक साह एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार अशोक जस्तै अन्य भारतीयले अनेक प्रोपागाण्डा अपनाएर नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन् ।
कसरी लिन्छन् त भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता ?
नम्बर १– जिल्ला प्रशासन, वडा कार्यालयहरुका अधिकारीरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी नागरिकता लिने ।
नम्बर २– नेपालकी चेली भारतमा बिहे हुने भयो भने भारतीयले नेपाली नागरिकता बनाइदिए दाइजो नलिने भन्दै सर्त राख्ने र ससुराले ज्वाँईलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिने ।
नम्बर ३– अहिले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भएपछि बच्चा जन्माउनैका लागि समेत नेपालका अस्पतालमा आउने र अस्पतालले दिएको रेकर्डका आधारमा नागरिकताको सिफारिस लिने ।
नम्बर ४– भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन नेपाल भारतबीच भएको सन १९५० सन्धीको सुविधा लिएर नेपाल छिरेका व्यक्तिहरुले २०६३ सालमा ४६ सालमा जन्मेको देखाए भने २०७२ सालको संविधानले २०७२ असोज २ गतेसम्म जन्मेका लागि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो ।
नम्बर ५– राज्यले पटक–पटक राजनीतिक परीवर्तनपछि विभिन्न माग पूरा गर्ने नाममा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने आधार मिति परीवर्तन गर्दा धेरै भारतीयले नागरिकता पाए ।
ट्रम्पका कारण अमेरिका र चीन बिच सम्बन्ध बिग्रीदै
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 December 17, 2016
‘अहिले देखिएका जति पनि कोरोना सङ्क्रमित छन ती निषेधाज्ञा हुनुभन्दा अघिकै’
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 August 30, 2020
पद्मश्री सम्मान र पुरस्कार बैरागी काइँला र कार्कीलाई
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 October 15, 2016